WordPress ee Ganacsiga Yaryar | Martech Zone
Sabti, Sebtember 8, 2012 Isniin, February 1, 2016 Douglas Karr
In kasta oo ay jiraan tiro dad ah oo ka tirsan wershadaha riixaya WordPress, haddana waxay ku noqon kartaa cabsi ganacsi yar oo aan lahayn tiknoolajiyad farsamo si ay u qaadato dhismaha tusaale ahaan WordPress. Kani waa faahfaahin weyn oo ku socda qof ama koox waxa ay u baahan yihiin inay fahmaan oo ay dejiyaan markay qorsheynayaan iyo hirgalinayaan boggooda WordPress. Waxaan sidoo kale jeclahay sawir-gacmeedkan maxaa yeelay waxay u baahan tahay adeegsadaha inuu gujiyo-ilaa microsite is-dhexgal si aan u arko jawaabta.
Fikradayda, waxaa jira hal talo oo kaliya oo ka maqan talooyinka - taasna waa in lala socdo a premier WordPress martigelinta adeegga sida Flywheel. Adoo raacaya marti-qaade weyn, meherad yar ayaa garaaci karta kalabar arimahan liistadooda, oo ay ku jiraan keydinta, amniga, dayactirka, waxqabadka, iyo taageerada!
Tags: sida loo wordpressdejinta wordpresswordpress sida loo sameeyo
Sep 9, 2012 at 7: 12 PM
OMG! Jeclaw qoraalka "Fikradayda" inta badan oo dhan! Kumaa maskaxdooda saxda ah xitaa tixgelin kara tan markaan hadda heysanno xalal SaaS weyn oo raqiis ah? Halkan Tyner Pond Farm (ganacsi cad oo yar.) Waxaan u isticmaalnaa Compendium iyo Hubspot labadaba. Way fududahay, la qiyaasi karaa oo aan qaali ahayn. Maya meesha aan ku arko macluumaadkan wax ku saabsan falanqaynta ama cabbiraadda ROI.
Sep 9, 2012 at 9: 38 PM
Dadku xaqiiqdii way dhayalsadaan ilaha ay u baahan tahay si loo dhiso hirgelinta xirfadeed ee WordPress. Waxay u maleynayaan inay tahay “bilaash” ka dibna si tartiib tartiib ah ayey u soo ogaadaan dhammaan arrimaha la xiriira qaabeynta, waxyaabaha ku habboon, dhismaha, kaydinta iyo amniga. Waan jecel nahay WordPress laakiin waxaan heysanaa WordPress waqti-buuxa ah horumariyaha iyo naqshadeeye shaqaalaha staff ma ahan ganacsiyo aad u tiro badan inay leeyihiin ilahaas!
13, 2012 at 2: 33 AM
Waad ku mahadsan tahay i baraya sida loo maamulo ganacsi yar. WordPress runtii waa mid la aamini karo oo wuxuu leeyahay fahan fahfaahin ah. Waa wax faa'iido u leh ganacsi badan, maadaama ay u noqon karto cunsur dheeraad ah dadkaaga.